Etu esi hazie sistemu GNU / Linux? | Site na Linux
Hazie GNU / Linux na Grub Customizer
Ọtụtụ ndị ọrụ GNU / Linux nwere ihe ịma aka egnke onwe Ewezuga iji ya maka otu ebumnuche ha jiri họrọ ya dị ka sistemụ arụmọrụ, inwe ike ịhazigharị Distro gị dị ka o kwere mee iji gosipụta ụdị arụmọrụ sistemụ arụmọrụ nwere ike ịbụ na ndị onwe.
Distro ọ bụla nwere ngwa ya na usoro ya dị iche iche iji hazie nke ọma na ụzọ dị irè ma e nwere ọtụtụ ndị a na-ahụkarị ma a na-achọta ha n’ime ebe nchekwa nke nke ọ bụla n’ime ha. N'ime akwụkwọ a, anyị ga-anwa ịkọwa ma kọwaa nke kacha mara amara na nke kachasịkarị maka Distros niile, iji kwado ndị ọrụ Sọftụwia Na-akwụghị ụgwọ na GNU / Linux World iji mezuo ebumnuche ha ịhazi na njikarịcha nke Distros dị iche.
1 Hazie GNU / Linux
1.1 Grub Nhazi
1.2 Plymouth / DEBIAN Plymouth Onye njikwa
1.3 Banye njikwa
1.4 Njikwa Window
Hazie GNU / Linux
N'ime ngwa nkeonwe anyị hụrụ:
Es ihe eserese eserese nke na-enye anyị ohere ijikwa menu buut nke GRUB2 / BURG Sistemụ nke GNU / Linux Operating Systems. Onye kere ya Ọnye na -bụ Daniel Ritcher? ugbu a na-aga maka 5.0.8 mbipute ma o bi n’ime en Launchpad. Ngwa a na - enye anyị ohere, gụnyere ihe ndị ọzọ:
Ịkwaga, hichapụ ma ọ bụ nyegharịa aha buut site na menu GRUB,
Dezie ọdịnaya menu ma ọ bụ mepụta ndekọ buut ọhụrụ,
Gbaa Boot Manager reinstallation na Master Boot Record (MBR),
- Hazie usoro ndabara iji rụọ ọrụ na mmalite,
Jikwaa ụfọdụ kernel parameters,
Dezie GRUB ndabere image na buut menu ederede agba.
Ẹkot ma ọ bụ yiri mmemme: Mbido, Onye ndezi KGRUBE y SuperBootManager.
Plymouth / DEBIAN Plymouth Onye njikwa
Plymouth bụ mmemme ọzọ maka njikwa nke mmalite nke sistemụ arụmọrụ lekwasịrị anya n'inye ọnọdụ eserese na mmalite nke sistemụ arụmọrụ, ya bụ, ikwe ka ngosipụta nke ihe ngosi ma ọ bụ static, kama ọnọdụ ederede (ngosipụta nke izizi ozi) egosiputa mgbe kọmputa na-amalite.
Na ụfọdụ sistemụ dịka Ubuntu ma ọ bụ Mint awụnyere ya na ndabara, na ndị ọzọ, ọ bụghị dị ka DEBIAN. Plymouth bụ ngwụcha mmemme yana DEBIAN Plymouth Manager bụ Graphical Interface maka Plymouth nke dị na MX-Linux 17 Distro.
Ngwa a na - enye anyị ohere, gụnyere ihe ndị ọzọ:
Wụnye / Hichapụ Gburugburu
Gbanwee isiokwu Splash ugbu a.
Enwere ike iji ya site na njikwa (Plymouth) na / ma ọ bụ site na gburugburu ebe obibi (DEBIAN Plymouth Manager) iji mee omume ndị a kpọtụrụ aha na mbụ.
Ẹkot ma ọ bụ yiri mmemme: Njikwa Plymouth
Ndị Ngosipụta Ngosipụta (Display Manager / DM) a makwaara dị ka ndị nbanye njikwaHa bụ ngwa nwere eserese eserese na-egosi njedebe nke usoro buut nke GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ, kama shei ndabara ya, ma na-ekwe ka ntinye nke Onye ọrụ na sistemụ ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, usoro okike nke Distros GNU / Linux nwere ụzọ dị mma na mbara maka ndị njikwa ihuenyo. Ebe ọ bụ na ọdịiche ha dịgasị iche dịka nke ndị njikwa window na gburugburu desktọọpụ.
Ndị njikwa a ha na-enyekarị ogo nke nhazi na nnweta isiokwu yana a na-ahazi ma ọ bụ kachasị nke ọma site na ọnụ ma ọ bụ njikwa na-agbanwe faịlụ nhazi ha.
Otu n'ime ndị isi, ọtụtụ ndị ji mee ihe na ndị a ma ama bụ:
Offọdụ n'ime ha nwere, dịka LightDM, ngwa ngwa eserese nke na-ekwe ka njikwa ha. Maka LightDM enwere "LightDM / lightdm-gtk-greeter-ntọala GTK + interface" nwere 4 ọrụ ngalaba na mmemmem customization nke Nnata ihuenyo na ya ọcha dị ka:
Ọdịdị: Okwu, akara ngosi, Font, Akwụkwọ ahụaja na njirimara Onye ọrụ.
Ogwe: Wigdets nke Oge, Datebọchị, Asụsụ, na Nnweta, Oge Oge na Ike.
Ọnọdụ windo: Iji dozie windo ebe onye ọrụ na-edebanye ma banye.
Ndị ọzọ: Na-enye gị ohere hazie ndabara Accessibility ngwa nke Ihuenyo Manager na ihuenyo Ike nchekwa nchekwa kwa.
Ndị ọzọ dịka KDM ma ọ bụ SDDM site na Ogwe Ntọala General nke Desktop Environment nwere ike ịhazi.
Sistemụ Ọdịdị Ntọala Ohere
Ndị njikwa Ohere
Njikwa Window Ha bụ ngwa ndị ahụ ọrụ ha bụ igosi windo eserese nke ngwa arụnyere na sistemụ arụmọrụ na onye ọrụ, ka ha nwee ike ịmekọrịta ngwa ngwa.
Ya mere, sistemụ arụmọrụ ọ bụla na-abịa na Window Window nke a na - ejikọtakarị ya na Desktọpụ Environment (GNOME, KDE, Plasma, XFCE, LXDE, na ndị ọzọ) iji mepụta mmetụta eserese na Windows nke sistemụ
Otu n'ime ndị njikwa Window kacha jiri rụọ ọrụ bụ:
N'ime ndị na-amachaghị ma jiri ya bụ:
Onye kere windo
Onye obula nwere ihe nhazi nke ya nke gha ekwe ka ebe Desktop ahororo puru iche n’uzo puru iche na nke onwe ya, ya mere onye oru n’ile nwere ike inwe Distro nke onwe kariri!
N'ikpeazụ, iji hazie GNU / Linux Distro anyị nwere ike iji Conkys mee ihe Njikwa ConKy ma ọ bụ ụfọdụ n'ọdụ ụgbọ mmiri, ịhọrọ n'etiti Docky, AWN, Cairo Dock ma ọ bụ ndị ọzọ ị họọrọ.
Iji nke a, anyị nwere ike hazie ma bulite sistemụ arụmọrụ GNU / Linux.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Etu esi hazie sistemu GNU / Linux?
HomeBank: ntinye ego eji emeghe ego na emeghe